Bụ Nokia 3210 kasịnụ ekwentị niile oge? - News Ọchịchị
Bụ Nokia 3210 kasịnụ ekwentị niile oge?
Isiokwu a na-akpọ “Bụ Nokia 3210 kasịnụ ekwentị niile oge?” e dere site Hannah Jane Parkinson, n'ihi na theguardian.com on Friday 19 June 2015 14.35 UTC
Jide ekwentị - Nokia nwere mara ọkwa ya nloghachi ka mobile (cell) ahịa. The Finnish telecoms ibu, nke bụ otu nnukwu emeputa ihe nke mobile handsets n'ụwa, ka kwetara na Microsoft na-amalite na-emebe ntị ọzọ na 2016.
Microsoft zụtara ụlọ ọrụ si faltering ekwentị mkpanaaka unit maka € 5.44bn (£ 4.6bn) na 2013, mgbe adalata ahịa na ihu nke mpi si Apụl. Ma ugbu Nokia si onye isi Rajeev Suri nwere kwuru Nokia bụ laghachi, anyị enweghị ike inyere N'izo aka ná ya mpempe de iguzogide: na Nokia 3210. Ebe a bụ ihe mere anyị n'anya ya.
Batrị mgbe nwụrụ
The iPhone 6 nwere ihe nkezi ndụ batrị nke na-erughị otu ụbọchị, na Samsung Galaxy S6 abụghị nnọọ mma. The 3210? Ga-adịgide adịgide maka, dị ka, a izu. Ikekwe izu abụọ, dabere na otú mgbe agwọ e keere.
E nwere ihe a mere a egwuregwu mere agba na internet:
Dị nnọọ na-etinye na a jaket m ikpeazụ yi na a agbamakwụkwọ na 2001 na hụrụ a Nokia 3210 na-aba n'akpa uwe. Ọ ka nwere 2 Ogwe batrị hapụrụ
Ọ n'ụzọ nkịtị emebighị. Mgbe
Anyị niile maara na ekwentị ụlọ ahịa n'etiti n'ime obodo na ụlọ ahịa malls na-eme a na-egbu si kụrisịa smartphone meziri. Ọ gaghị eme na sturdy 3210, erikpu 153g. The 3210 nwere ike ndụ atọm bọmbụ, ala ọma jijiji na ikekwe abụọ jikọtara.
Dobe ya n'ala na cover ga gbapụta anya, batrị gbụọ ya ọnụ mmiri si, ma ọ ga-Ẹkot a chipped mbo aka. Polish ya anya, snap ọ laghachi azụ ọnụ, na ihe niile ga-ok. Sịkwa ndị ugbu a egwuregwu na idobe handset ga imebi n'ala, na ọ bụghị ndị ọzọ ụzọ gburugburu.
The 3310, onye-nketa ka 3210, nke nnoo anya dị ka 3210 tinye on a ụyọkọ nke arọ, ọbụna karị siri ike, na dugara -Apụghị ibibi ebibi 3310 meme.
-Apụghị ibibi ebibi 3310. Amirite? Foto: KnowYourMeme.com
Nokia 3310 a na-eji dị ka batrị ebule. Foto: KnowYourMeme.com
Nile na agba!
Mgbe nwere okwu bụ "fascia" otú na-ewu ewu dị ka oge nke 3210. Anyị niile nọ na banyere fasciae. Ọnụ ọgụgụ nke agba! The ewute ndị! The decals! Akwụkwọ mmado! The akụ aka-anya ndị breaching ọtụtụ dị iche iche film na music nwebisiinka! The acha roba keyboard ogwe! The N'ụbọchị nke abụọ ekpuchi! Enwere ihe ọ bụla nke ahụ bụ anya-ókè mgbe ọ bịara decorating na 3210. Porn-sitere n'ike mmụọ nsọ ejiji?, ekpuchi na, enweghị usoro, ụdị nke chocolate na ha.
Onye ọ bụla nke a na na na na iPhone. "Space isi awọ"Na" wepụrụ ebubo "? Ọ ga-ọzọ na-agwụ ike?
Agwọ, O doro anya na
Chọpụta, ugbu a kasị ukwuu Kọmputa Arts na Rockstar egwuregwu dị na mgbata nke onye na-eji ngwa, gobbling ekwentị ohere na awa nke oge. I nwere ike welie a ezinụlọ dum na The Sims ma ọ bụ nweta Premier League na FIFA, ma ọ dịghị ihe pụrụ iti ndị dị ọcha, na purist, adrenaline rosh Agwọ.
Kwụsịtụ na ị na-screwed. Onye ọ bụla maara na, a rookie njehie. O doro anya na, onye ozugbo meriri agwọ, na egosi na a na 13 nkeji gif. Egwuregwu bụ ka dị na-egwu dị ka a YouTube Ista egg ruo mgbe 2014, mgbe Google were ya. Atụla ọjọọ? N'ezie.
Mmetụta nile nostalgic now? Mgbe na-atụ egwu - na 3210 bụ ka dị ịzụta na eBay. Ọ bụghị naanị na, ma otú bụ ngwa. Smartphones? Meh.
• Isiokwu a na emeziri on 22 June 2015. Rajeev Suri bụ Onyeisi nke Nokia, ọ bụghị Microsoft dị ka ihe na mbụ isiokwu kwuru.
Ize ndụ ahụ ike nke Mars ozi ga gafere NASA Lim ...
Japanese rọketi na-ewe onunu, robot ka ohere Sta ...
25651	0 Nkeji edemede, Atụmatụ, Hannah Jane Parkinson, Microsoft, mobile igwe, News, Nokia, Smartphones, Technology, telecoms
← The 11 PlayStation egwuregwu ị nnọọ ike na-atụ uche na-abịa afọ Amazon unu si n'ihe unu Paperwhite 2015 nyochaa: na sharpest na kasị mma ma →